फेसबुकमा फत्तेमाया | Online Sahitya
हराएका मानछे भेटिए भटाभट हो, थुपैैर मानछेहरू हराएका थिए । हृदय र शरीरहरू हराउने करम बढिरहेथयो । हिजोआज ती भेटतै छु विस्तारै-विस्तारै ।
सूचनाको जालोले नबेरएिको घर रहेन । खबरको अँगालोबाट अलगगिएको पिँढी अछुतो रहेन । अनि घर र पिँढीबाट डोरएिर पुगेका परेलीले मौनतामा बाँधने कुरै भएन ।
मेरा आँखामा उस तै-उस तै छ समयको इन्द्रेणी मैले तयो इन्द्रेणीमा माझिएर, थपिएर, गुजुलटिएर अनि मिसिएर नयाँ मौसम भितरिरहेको कुतीकुती पढिसकेको छैन । समयले किन कुथरयो मलाई ∕ ऊ सूचनाको नयाँ लुगामा आइसकेछ ।
म त उसलाई बूढो हुलाकीका स वाँ-स वाँमा खबर परखिरहथे, ऊ आइसकेछ फेसबुकमा हराउनेहरू चुपचापसँग हराउँथे
काम खोजदै जानेहरू हराएका थिए लनडनतिर । कामको भारले छोपिएका थिए सिडनीतिर । दामको भोकले बिलाउँथे नयुयोरकतिर । नोटको बोझले अलभिmइएका थिए बेइजिङतिर ।
ती सबै भेटिनथे फेसबुकमा ।
मेरा छातीभर िथुपरै भुमरी उमारी-उमारी फेसबुकका तस िबरले हुतयाउँछन जिजञासाहरू अपेकषाहरू, सोधाइहरू । लामा र गहिरा कुरा आएका हुनछन, पर... संसारबाट । मैले दिनै नसकने कुरा फेसबुकले बोकेर लयाएका कौतूहलले केरकार पारछन । र, म हारेको पो छु त ।
"मामा, बनद नहुने स टोरको कमाइमा बाँचेको छु नि " अस टरेलियाको भानजाले फेसबुकमा जीवन पोखे ।
कृषिका तिनी मापाका थिए । हाँगा-हाँगा जोडेर नयाँ फलाउने खुबै खटथे तिनी । बगरमा, बदाम, सखरखणड र गोल काँकरो तिनले फलाउँथे बालुवा जोतेर ।
"तकमा त मनतरालयकै बाबुसाहेबले लाएछन " भानजाले आफनो विरकति फेसबुकमै पोखे
पौरखी भासिएर गएको एउटा सानो स वर थियो यो । पसिनाको उपेकषित बोली थियो यो । मसँग स तबध हुने मनको तहमा थपियो अरू एक पंकति ।
तिनका समभावय जीवन र परापति म निरनतर पढिरहेकै छु । समयलाई भेटन र खोजन दगुरेका परेली म हेररिहेकै छु । अननत सपनाका खातमा तिनले उभिएर चाकाचुली खेलेको देखिरहेकै छु म ।
"काका, आमाको दाहसंस कारमा आउन सकिनँ । हुने हुनामी भइहालयो । मैले अरू चुनौती भोगनुपरछ फरके भने..."
टोकियोमा रहेको भतिजो भनदैछ फेसबुकमा ।
संवेदनाको सबभनदा नालायकी परतिकरिया हो, मेरा निमति यो । वरतमानको पराजित अनुहारको शृंखलामा थप परमाण । हराइरहेको दृषटि र अनयोल धुकधुकमा फेसबुकको यो भनाइ मारमिक ठानछु । जीवनभनदा अरको उजयालो तरक र सिदधानत माननै सकतिनँ म ।
कति छिटो-छिटो फडको छ परविधिको ।
हरेक मिनेटमा मैले किनेका विदयुतीय सामान पुरानिनछन र घटेका मूलयमा एकदमै सुविधा र सभयतालाई पारछन असाधयै सजिलो । छिनमा मेरो हातमा लयाइदिनछ विजञानले नयाँ-नयाँ आविषकार । नौलो सामगरीले दिने आननदी । अनि सहज जीवनको उमंग ।
हिँडिरहेकै हो बाटो । तररिहेको हो जँघार । काटेकै हो उकाली । चढाएकै हो फूलपाती ।
फेसबुकमा यी सबैबारे अरू नयाँ आँखा, भावना र विमरशले परगेलने शकति भेटिरहेको छ । अचममले ती सबैलाई छामछु म, अथरयाउँछु म र नियालछु म ।
मेरा कानमा तयो आवाज थियो- लिथोगराफीको, टाइपराइटरको । नपतयाउँदो हललाले उसको तीवरताले हामीलाई सघाएथयो । साँचचै सहज जीवन पारेथयो हिजोका दिनमा ।
आज अरू हजार पाइला अघि आएर फेसबुकमा मलाई छुटेका मनसँग भेटघाट गरििदएको छ । मेरो स वतनतरताको महान मूलयलाई आतमसात गरेको मानछु म फेसबुकले ।
"मलाई घयूचाकुको खूब याद आउँछ । याँ काँ पाउनु ती स वादिला खानेकुराहरू "
बरलिनमा रहेको साथीले सांस कृतिक कुरा लेखेछ फेसबुकमा ।
माघे संकरानतिको ठिही छ । साथीले पोखेको औडाहालाई म फोटो खिचेर पठाउँछु र स वादलाई बयान गरछु पंकतिमा । शबदको उचाइ, गहिराइ र चौडाइ झन सरवमानय भइरहेछ फेसबुकमा ।
एकमा एक घटाए एकै रहनछ, महाकवि देवकोटाले भनेथे रे आफनो महानतम तरक र सिदधानतको वयाखयानमा । वास तवमा महामनाहरू खयालखयाल अनि खेलाँची बोलदैनन पनि, सौचदैनन पनि ।
अननत समबनध शृंखलामा आफनो परचिय गाँसिने फेसबुकको यो अदभुत परविधि देवकोको वयाखयान नजिक पुगेको ठानछु म । मेरो परचिय वयापत पारछ अनेकसँग जोडिएर, टाँसिएर अनि गाँसिएर ।
मसँगै बस तीमा लुकामारी खेलनेहरू तननेरी उमेरमा विछोडिएका पनि अहिले भेटघाट फेर िबाकलिएको छ । मसँगै बगरमा काँसका डाँठहरू चुस ने पनि बैँशे बेलामा छुटटएि पनि आजका दिनमा फेर िभएका छौँ एकै आँतका । आफनो छायाँ हाँसेको उमंगको बेला यो ।
मानिस हराउनु वा समबनध ओहरालो लागनु असाधयै चोटपूरण स िथति मानछु म । कति गहिराइ दुःखाइ वा संकटका पतरमा पाइला टेकनुपरछ- एउटा मानछे हराउँदा ।
समय, शरम, सौनदरय, सभयता र संसार चकमनन बनछ- मानछे हराउँदा । मैले तयस तो पीडा पटक-पटक भोगेको छु । मनबाट भेटिएर गएका मानिसहरूको अभावले घरी-घरी वयाकुल भएको छु म ।
समाजको एउटा बेजोड मूलय छ फेसबुकमा ।
भननु, सुननु वा सुनाउनु यी सूचनाका हिसाबले केही दरबिला पकष हुन । सामाजिक संस कारका बलिया सिँढी मानदै आएको तथय छ हामरै वरपर ।
तयही कुरा वयकति र सामाजिकी चासोमा पोखने - दुवै अधिकार पाएको छु मैले फेसबुकमा ।
यसरी परजातानतरिक संस कार सिकेँ परविधिबाट ।
उमेरको एउटा परहार र लखेटाइमा निकै परेँ म । ती जीवनका भयानक संघरण र रूपानतरणका कषण मानछु म । कति असरलल निरणय र कति मौन परापतिहरूका यी सबै चरणमा मैले गुमाएँ निकै मानछेहरू ।
फेसबुकको तयही जालोले एकपटक मानछेसँग छुटटनि नचहाने मेरो हृदयले पाएको छ परेमपूरण थपथपी ।
कारण तयही हो- अनेक मानछे, अनेक मन ।
यो एउटा मीठो स मृतिले फेसबुकपरति आस था फैलाउँछ । धेरै हुन वा समूहगत वातावरणको ।
मेरो छिमेकी बचचु भुजेल ।
ऊ कहिले जनमियो, कहिले बढयो, कहिले हुकरयो । पततो नभएको सहज वातावरणमा बचचु सपिरयो । ठूलो परविारमा आमा, काकी, ठूलीआमा वा अनेक काखमा शिशुवय भयो सुखद, सुरकषित र सस नेही पनि ।
"हूलमा हुरकिनजतति आननदपूरण अरू के छ र ?"
उसको साधारण तरक थियो ।
मेरा नािमति यो अनौठो र अपतयारलिो घरी-घरी हुनछ । नहुने कुरा पनि भएन- सानो परविारमा हुरकेपछि । संयुकत परविारमा हुरकिने मौका परापत हुन सकेन मलाई ।
फेसबुक- अनुहारको एउटा अननयतम करमः ∕ मैले ती शृंखलाबाट महादेशका मौसम जानन सकेको छु । मैले ती समबनधहरूबाट महासागरका मनस िथतिहरू पढन सकेको छु । महादेश र महासागर त एउटै आँगनमा भेटिनु अझ अगलो उपलबधि हो ।
यतिखेरका मानछेहरूलाई फेसबुक तयही परचिय बनदै छ दिनहुँ ।
मैले गृहकारय सारेँ बिजुलेका कापीबाट । तयही दिनदेखि ऊ र मेरो मन फाटयो । धेरै हिउँदले खोलाहरू संलयायो ।
बिजुले आज खाडीको देशमा पहरा दिने काम गरछ ।
मैले सूचनाको तयही ताँतीमा उसलाई भेटेँ । उसले सनतरस त स िथतिलाई देखेँ । उसको विधवंस त दिनचरयामा उमिररहेको सनतरासको सिउँडी देखेँ ।
खयालखयालमा करवीरेसँग ठोकाबाजी परेथयो ।
उसले मानेको नेता घयूबेचुवा थियो । मैले मानेको नेता तरबार बेचुवा थियो ।
हामरो असीम शरदधाका कारण तिनले बजाइरहे हामीलाई, जुधाइरहे हामीलाई अनि लडाइरहे । मुलुकका अनेक पँधेरामा बाझथयौँ हामी, गरामा जुधेथयौँ हामी, लडेथयाँै हामी ।
कोरयिाबाट करवीरेले फेसबुकमा खबर पठायो, "हामीले देश चिनेछौँ, देशका हली चिनेनछौँ "
मैले धेरै दिनसमम दौँतरी गुमाउँदाको उकुसमुकुसलाई हुरकाएथेे आफनो शरीरभर ि। आज तथय कुरा जानने साथी जोरेँ तयही सूचनाको चौतारीमा ।
परतयेक दिन उही लागछ । परतयेक अनुहार उस तै लागछ । परतयेक समय तयही लागछ । तर, भिनन महततव र मूलयमा ती परतिस थापित छन । तयसको परमाण बाहिरएिका मनले बोलेका निषकपट स वरबाट जाानदछु म ।
यो चेपटो ठानिएको पृथवी यतिबेला झन सानो र हतकेलाभरकिो लगिरहेको छ मलाई । अपार मानिएको यो धरती झन-झन साँगुरएिर नजिक बनेको ठानदैछु म ।
टाढा कोही रहेन । रहनछु भनेर नेपथयमा लुकनेहरू पनि हरेकका खबरदारीमा गएका छन ।
फेसबुक, यहाँनिर विजञान नहारेको परमाण भेटिनछ । "चौतारीमा बसेर धेरै परका अगला पहाडहरूमा आँखा बिसाएर डङरंग लडेको कुरा यो अपारटमेनटमा मिस गरछु ।"
पाँचपटकसमम अंगरेजीमै फेल भएकी फततेमाया भेटिई फेसबुकमा । कता कसरी सियोल पुगी ऊ, खबर नखुलाए पनि- थाहा भो, देश कलपेर भककानो छोडनमा एक रहिछ ऊ पनि ।
"हामी धेरैले उतैका लाठेहरूसँग घरबार जोड यौँ । तयततिकै हो नि भरबार त "
फततेमाया यो कुरा फेसबुकमा पढेपछि अरथहरूको पछि कुँदे निकै नै ∕ शबदको सामथरय हेरेँ ।
अरथको आयाम मनबाट मस ितषकतिर सारेँ ।
आँखा लागने अनुहारमा सुरकषा कालो टीका लगाउने किशोरीजस तो दरशन पालदैछु ।
तर, गाजल लगाएर आँखै मन पर‍यो रे दुनियाँलाई
एउटै थालमा भात खानेहरू भेटिनछन । एउटै पिङमा लठारनिेहरू भेटिनछन । एउटै पाटीमा अकषर कोरनेहरू भेटिनछन । एउटै उखु दुईतिर चुस नेहरू भेटिनछन । एउटै सिरानी दुईतिर बाँडेर सुतनेहरू भेटिनछन ।
फेसबुकमा यी सबै अनुहार भेटिनछन पटक-पटक ।
कोही न कोही कतै न कतै कसै न कसै समबनधमा उनिएर आउँछन । तिनको आगमन सहसा जति हुनछ- ती कुनै समय जयादै रहस यमयी भाए हराएथे । चुपचाप हराउनेहरू यतिबेला ठूलो होहललासँग भेटिरहेछन फेसबुकमा ।
देशबाट पराधयापकहरू हराएथे । कलाकारहरू बेपततिएथे । वैजञानिकहरू लपता भएथे । शिकषकहरू लुपत भएथे । कविहरू बिलाएथे ।
देशबाट परदेश पस ने अनुहारको खोजी उही आफनाहरूका लागि खललो भयो, धेरैपटक । हारगुहार कतिनजेल गरने ? हराउनेहरू बोलदैन थिए । हराएको ठाननेले उततर नपाएको तीतो समय आउँथयो, फेर िपनि आइरहनथयो ।
मानिसबाट मानछेको तह गिरेको अतिशय चोट बढिरहेको थियो जताततै । मैले सहर र बस तीका धेरै गोरेटोमा हराएका मानछेको तस िबर टाँसेका थिएँ । मैले घना बस ती र आवादी बजारबाट नामी-नामी अनुहार सुटुकक अनतै गएको जानकारी पाएँथेँ ।
यो अकलपनीय सोधाइ धेरैपटक भएकै थियो । नआउने उततर हो भनने देशको सबै भागमा परशन थियो । तैपनि जिजञासा अनेक रूपमा आएर चककर लाउँथयो ।
हराएकाहरू यति अनेक अवतारमा भेटिनछन । संसारका ठूलाठूला सहरमा तिनका ओठ चलेका छन । भवय महानगरमा तिनका पसिना निकलिरहेका छन । दुनियाँका विराट बजारमा तिनका मस ितषक खिइरहेका औँलाका वेग र मनको आवेग हेरदा लागछ, आगो छ, हुरी छ र कमप छ तिनको वरतमानमा ।
फेसबुक भनछ- बाहिरै छ ठूलो नेपाल ।